Xuluusha 3 Xal Oo Xakame U Ah Nafada Sicir Bararka – Maciishada Iyo Sarifka Dollarka Ooda Jabiyey.
Xuluusha 3 Xal Oo Xakame U Ah Nafada Sicir Bararka – Maciishada Iyo Sarifka Dollarka Ooda Jabiyey.
Ganacsiga iyo ganacsatadu sida roobku u doojiyo deegaan dhimatay ayey qurux , ill-waadsan iyo foof duunyo u yihiin dawlad iyo dad intaba; markale dakhliga cashuuraha ka soo xarooda maal-duunyaha laga guro ganacsatada ayaa sal u ah taayirka wareejiya mishiinka maamulka dawlad kasta oo ka talisa dunida guudkeeda.
Roobabka qaar baa wata gufaacooyin dabaylo, danab iyo duufaano dad iyo duunyaba u daran; tu lamid ah waa ganacsatada qaar kuwa kalifa in ay isku wada daba daydaan ee tuuraha ugu taagan in ay ka dheefaan dheeraad dhiiga maatida shacabka danyarta ah ee tabaalaha wakhtiga tacalus iyo abaaruhu ku tiigaaleen.
Ganacsadaasi dheef kor dheeraad doonka ah ayaa had iyo jeer faraha hore
ugu taagan si aan kama’ aheyn oo kas ah dab iyo gaas ku furida kor u kaca ascaarta maciisha la calafsado iyo kordhinta qiimaha sarifka lacagaha qalaad ee doolar ku calanka u sido .
Kas iyo badheedhe ayey uga dhaga adeygeen fulinta digreetadii madaxweynuhu qalinka ku duugay iyo u hogaansanaanta sharciyada dalka!! ( tani waa walaf ay ku walfeen jaqida dheefkorka dhiiga dadweynaha diiftu ka muuqato oo qaxar , rafaad iyo dhib horseedi kara iyo abuuranka dabaqado nololeed oo aad u kala sareeya.
Waxa jira ( ciidan qaran, macalimiin iyo shaqaale dawladeed oo dakhliga mushaareedka soogala qeymadiisu dhantahey $100 bishii oo badankoodu leeyihiin xaasas iyo caruuro badan , xidid ,xigaal iyo marti, oo waliba laga rabo kharashaadka nolol maalmeed ay dheertahey kiro guri, tarbiyad ubad iyo kharashka tacliintooda!! waraabuhu halkuu xerada uga dhacay habeen horuu u sahantahey!!
1. hadaan dhiig-miiratada talaabo cad laga qaadin sideebay shaqaale weynaha dawlada iyo shicibkaba noloshooda u maareyn karayaan mushaarkoodu yahey $100???!
2. ganacsatada walaftay ma kaalmadii ay abaaraha ka geysanayeen ayey isleeyihiin dawlada waad iska seexiseene dadka u dhaafa??!
Xuluusha 3 xal oo xakame u ah nafada sicir bararka , maciishada iyo sarifka dollarka ooda jabiyey!! sharcigaan xeel iyo awood laheyn meelna tagi waa!!
1. wasaarada ganacsigu ha xadeyso qiimayaasha badeecadaha ganacsi ee dadweynuhu iibsanayaan sida ay u xadeeyeen qiimaha maciishadaha wadamada dariska iyo duniduba; iyada oo wasaaradan iyo rugta ganacsigu iska kaashanaya xog ogaalka qiimayaasha badeecadaha dibada lagaga soo iibsado si go’aan maangal ah ay ku xadeeyaan qiimaha lagu iibsanayo nooc kasta oo badeecadaha dalka gudihiisa lagu iibiyo ah; go’aan wada dhawraya ganacsatada iyo dadweynaha iyo waliba xornimada suuqa ganacsiga.
2. dawladu ha abuurto nidaam ganacsi oo ku meel gaadh ah oo dawladu leedahey si loo xakameeyo sicir bararka badeecadaha iyadoon lagu xadgud beyn xornimada ganacsiga iyo ganacsatada islamarkaana u daneynaya dadweynaha ay masuulka ka tahey dawladu.
3. wasaarada maaliyada , bangiga dhexe iyo wasaaradaha ay khuseyso ha abuuraan nidaam sarif lacageed; abuurida xarumo goboladoo dhan laga yagleelo oo lagu sarifo lacagta doolarka dawlada soo gala oo hawl-wadeen looga dhigo cutubyo isku dhaf ah ciidamada turubataariyada, ciidanka nabadgalyada iyo ciidanka dharcada kuwaasi oo xarumaha ku sarifaya doolarka dawlada soo gala; si loo xakameeyo suuqa sarifka doolarka iyo suuqa madow intaba iyadoo loo daneynayo dadweynaha lana fulinaayo qiimihii horey dikreetada ugu soo baxey, islamarkaana lagu xadgudbeyn xornimada ganacsiga.
U hogaansanaan la’aanta sharciga iyo nidaamka dawliga ah waa dawlad la’aan iyo dad qalatonimo; ganacsiga dalku waa xor sida dastuurku dhigayo balse xornimadu hadey xakame xeelaysan weydo waa darjiidh iyo ninba siduu doono ha yeelo; si noloshu suuragal lagu nagaado u nuqoto dawladu ill aan libiqsaneyn ha u la haato duufaanada iyo dabeylaha dadweynaha maraya midabkooda.
Kalsooni buuxda ayaan ku qabaa in aaney dawladu dayaceyn dadweynaheeda daafaha kala jira; xaalkuna noqoneyn miskiin baa misko la fuulo leh.
Wadamo badan ayaa illaa maanta ku caano maaley hal-abuurkan madax-jabinta ku ah sicir bararka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad ee xadhkaha goostay
Dulucduna waxay tahey si ay ula baxsadaan shucuubtooda ay ku xadgud bayaan ganacsatada macaashka dheeraadka ah ku mamay.
Fikirkan iyo tallooyinkan kor ku xusan oo ay dawladu hirgaliso dhamaan ama waxkamid ah iyadoo raacaysa hanaanka maamul wanaaga , dhawrista xuquuqda muwaadiniinta iyo hirgalinta sharciga dalka ee ay ummada reer somaliland masuulka uga tahey waa hubaal in dawlada, dadka iyo dalkuba wada guuleysanayaan.